EVidiciatico, ikona yakho yoxolo kunye nokuphumla
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguGrazia
UGrazia unezimvo eziyi-132 zezinye iindawo.
Ifulethi elipholileyo kwi-villa encinci, ezolileyo kwaye eqaqambileyo kakhulu. Ibandakanya igumbi lokulala elikhulu eliphindwe kabini kunye neTV, igumbi lokuhlala elinekhitshi kunye nebhedi yesofa ye-1 kunye nesiqingatha, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebalcony ejonge igadi. I-tavern (inomatshini wokuhlamba), igadi ejikeleze i-Villa kunye ne-barbecue iyafumaneka kuzo zonke iindwendwe ezifuna ukuchitha iholide apha.
Kumgangatho wokuqala, kukho balcony enetafile kunye nezitulo. Ecaleni kwayo, enye indawo enezihlalo ezi-4.
Ecaleni kwayo, elinye igumbi elinezihlalo ezi-4 sisisombululo esifanelekileyo kwabo banqwenela ukuchitha iiholide zabo kunye nezalamane okanye abahlobo ngelixa begcina ubumfihlo babo. Amafulethi ahamba ngomzuzu omnye ukusuka kwisikwere sedolophu, imizuzu emi-3 ngemoto ukusuka kwindawo entle yokuqubha kunye nemizuzu eli-15 kuphela ngemoto ukusuka eCorno Alle Scale. I-Vidiciatico ikwakhonzwa yiBus Line, ngoko unokuseta iholide yakho ngokuzimela ngokupheleleyo kunye nenkululeko enkulu.
Ukuphosa A ilitye ukusuka intliziyo dolophu, ungenza kunandipha uxolo kunye nokuphumla kwendawo yakho, kude ingxolo ukudideka kwaye ngexesha elinye kunandipha ubomi kwilali kunye ukuzonwabisa kunye nemiboniso, imarike etc ... ngoko nangoko ifumaneka ngeenyawo
Umbuki zindwendwe ngu- Grazia
Ixesha lokungena kunye nokujonga ukuphuma kuya kuvunyelwana